Guddoomiyaha degmada Hodan oo la magacaabay | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiyaha degmada Hodan oo la magacaabay
Guddoomiyaha degmada Hodan ayaa la magacaabay Kadib 25 maalin, dilkii Guddoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan ‘Dhagajuun’ waxaa maanta xilkii muddadaas bannaanaa loo magacaabay Cabdifitaax Xayir Ciise.
MUQDHISO, Soomaaliya - Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish oo hore u sheegay in geerida AUN Dhagajuun ay ka dhalatay is rasaaseyn dhex martay ilaaladiisa iyo ciidamada dowladda ayaa maanta magacaabay xilkii uu guddoomiyuhu ka geeriyooday.
Ilaa hadda dowlddu ma shaacin cidda sida rasmiga ah kaga danbeysaay dilkii Dhagajuun, inskata oo Wasiirka Amnigu sheegay in dad loo xirxiray hadana ku dhawaad Soddon cisho ma jirto cid maxakamad loo soo taagay kiiskas.
Markii uu bannaanka u soo baxay warkii ahaa in ciidamo tababar loogu qaaday Eritrea lagu laayay gudaha Itoobiya, Keydmedia Online waxa ay sheegaty in Dowladda uu Farmaajo hoggaamiyo ay dhacdo kasta oo weyn bulshaduna ka kacdo ay ku damiso dhacdo kale oo ka xanuun badan.
Hadda taasi waxay u muuqataa saadaal rumowday, waxayna kacdoonkii ka dhashay kiiskii dhalinyaradii lagu dhameyay dagaalkii Itoobiya Fahad iyo Farmaajo ku damiyeen dilkii Guddoomiye Dhagajuun, halka geeridii marxuumkaasna lagu sii baabiyay weerarkii lagu dilay AUN Jenaraal Galaal.
Magaacabidda Cabdifitaax Xayir Ciise oo ehel la ah AUN Dhagajuun ayay dadka natiijada baaritaanada saadaaliya ku sheegeen in kooxda Farmaajo ay soo xirtay kiiskii marxuumka.